Ronaldinho oo Talo wax ku ool ah siyay Neymar – Gool FM
Ronaldinho oo Talo wax ku ool ah siyay Neymar
Byare July 29, 2017
(Europe) 29 Luulyo 2017. Xiddigii hore ee kooxaha Barcelona iyo PSG Ronaldinho ayaa wiilka ay dhalashada wadaagaan ee Neymar kula taliyay inuu raaco wadnihiisa iyo meesha uu qalbigiisa doonayo iyadoo ay jirto in si daran lala xiriirinayo inuu ku biiro kooxda reer France.
Wararkii ugu dambeeyay ee ka imaanaya dalka Faransiiska ayaa tibaaxaya in Neymar uu dhammeystiri karo heshiiska uu ugu dhaqaaqayo kooxda ka ciyaarta Ligue 1 Isniinta soo socoto kaddib markii uu qodobo kala heshiiyay heshiiska rikoodka ah ee 222 milyan oo euro.
Ciyaartoyda Barcelona oo uu ka mid yahay kabtankooda Andres Iniesta, dhaliyaha Luis Suarez iyo waliba daafacooda Gerard Pique ayaa si shaacsan ugu booriyay Neymar inuu sii joogo Camp Nou, laakiin mustaqbalka 25 jirka ayaa mugdi sii galay kaddib markii ay tababarka isku dagaaleen Nelson Semedo jimcihii.
Ronaldinho ayaa ka soo tagay PSG 2003 si ugu soo biiro Barcelona oo uu ku qaatay 5-sano oo cajiib ah, wuxuu kula guuleystay labo jeer La Liga iyo Champions League iyo waliba abaal marino shaqsi ahaaneed sida Ballon d’Or.
Xiddiga ku soo guuleystay koobkii adduunka ee 2002 ayaa wiilka ay dhalashada wadaagaan ugu baaqay inuu raaco wadnihiisa marka ay sheekadu tahay wax ku saabsan waayihiisa ciyaareed.
“Waxaan u sheegi karaa oo kaliya inuu raaco wadnihiisa isla markaana uu faraxsanaado, uuna sameeyo waxa uu wadnihiisa u sheegayo.” Ronaldinho ayaa sidaa yiri.
TOOS u daawo: Real Madrid vs Barcelona - LIVE (El Classico)
GOOGOOSKA & SAWIRRADA: Barcelona iyo Real Madrid 3-2…(El Clasico oo isugu faantay goolal Classic ah)